organique gluten volontsôkôlà vary maimaim-poana rotina - China organika gluten vary maimaim-poana volontsôkôlà rotina Supplier,Factory -Qianna
ifanakalozy hevitra bebe kokoa
Ny tena ilaina ny voajanahary volontsôkôlà mainty bary rotina dia vary , dia manana tombontsoa ara-pahasalamana eto ambany
1.Possible nihena mety Colon Cancer
Misy mihevitra fa ny avo haavon'ny sélénium, ary koa ny sasany hita ao amin'ny volontsôkôlà phenols vary mety ho mifandray amin'ny nampihena mety Colon homamiadana. Ireo phenols dia eo amin'ny zava-dehibe ambony concentrations in volontsôkôlà vary noho ny fotsy, izay midika hoe fiarahana izany dia mety tsy ho hita amin'ny avo fanjifana vary fotsy. Ny avo afa-po amin'ny sakafo fibre koa handray anjara amin'ny ara-pahasalamana sy ny fandevonan-kanina tsinaibe rafitra.
Noho ny avo votoatiny fibre, mihinana ny sakafo avo amin'ny vary volontsôkôlà hanatitra fiarovana ny sasany manohitra aretim-disease.A fianarana natao tao Philadelphie nilaza fa ny sosona sela manodidina volontsôkôlà vary, (izay hamiratra eny, rehefa manao vary fotsy), Mety hampihena ny asa ny proteinina Angiotensin II, izay fantatra mba hampitombo atherosclerosis sy ny tosi-drà.
3.Fampidinana kolesterola ratsy
Volontsôkôlà vary dia tsara Loharanom-mety levona fibre, izay manampy amin'ny ambaratonga ambany ny 'ratsy’ LDL kolesterola ao amin'ny blood.There ihany koa misy soso-kevitra fa ny diloilo teo ihany ny vary, na volontsôkôlà bran menaka nalaina bary dia mety hanampy mba hampidina ny haavon'ny manimba kolesterola sy ny tosi-drà, raha mitoetra fitaizana tahan'ny 'salama’ HDL kolesterola.
4.Foana ny lanjan'ny vatana salama
Ny sakafo avo amin'ny sakafo fibre mitady hameno anao bebe efa mifandray amin'ny sakafo mihena fihinanana sy ny fikojakojana ny vatana salama lanja. Volontsôkôlà vary dia sakafo tena tsara loharanom-fibre, ary koa manana fanondroana glycemic ambany noho ny vary fotsy, izany hoe amin'ny ankapobeny dia miteraka milamina kokoa sy maharitra ela ra fiakaran'ny haavon'ny siramamy. Izany koa no mahatonga ny fitandremana bebe kokoa ho anao intsony, ary tsy azo inoana ho tsakitsaky na mila overeat.
5.Healthy tsinay asa
Brown dia mirakitra ihany koa ny vary dia be tsara Mora mampivaingana fibre izay mitoetra ao an-esory tsara ny taovany sy ny SIDA sy ny fandevonan-kanina excretion. Io karazana fibre manintona rano ny esory tsara ny taovany sy ny toy izany no mahatonga kokoa tsinay ranon hetsika ary manakana ny fitohanana.
6.Mifehy ra haavon'ny siramamy
Ny fibre in volontsôkôlà vary dia midika fa ny fandevonan-kanina fotoana io dia miadana kokoa noho ny carbohydrate ampiasaina kokoa voa, anisan'izany ny vary fotsy. Izany dia midika fa misy kokoa ny maso miadana kokoa famoahana ny siramamy eo amin'ny ran'ny renirano sy ny vokatra manana glycemic ambany Fanondroana (GI) noho ny hafa grains.A sakafo manan-karena amin'ny ambany GI, fibre avo sakafo Mifandray amin'ny ra milamina kokoa gliokaozy haavon'ny, izay afaka manampy mba hampihenana ny mety ho fampandrosoana karazana 2 diabeta.
7.Salama foana ny rafi-pitatitra
Volontsôkôlà vary misy avo lenta ny nutrient manganese, izay no takina mba hamokatra matavy amine sy ny hormonina ilaina mba hihazonana ny fahasalamana rafi-pitatitra.
Manampy hitandrina taolana salama
Volontsôkôlà vary lehibe loharanom-magnésium, izay heverina ho fototra ilaina ho an'ny ara-pahasalamana nutrient taolana miaraka amin'ny kalsioma sy vitaminina D.Magnesium no tena nutrient izay takiana amin'ny fananganana taolana sy ny tsy fahampiana dia mifandray amin'ny taolana kely sy ny fahosan'ny taolana any aoriana any. Iray kapoaka amin'ny vary volontsôkôlà misy momba ny 21% ny fepetra takiana isan'andro magnésium.
Fangaro: voajanahary volontsôkôlà vary lafarinina, koba tsara toto organika ovy waterShelf fiainana: 24volana